प्रधानान्यायाधीश विरुद्ध बीरगन्जमा बारले गर्यो विरोध ! - Nepal Post Daily
प्रधानान्यायाधीश विरुद्ध बीरगन्जमा बारले गर्यो विरोध !
बीरगन्ज, ०८ मंसिर । प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामाको माग गर्दै विगत एक महिना देखि आन्दोलनमा रहेको नेपाल बार एसोसिएशनले बुधबार प्रदेश २ सहित देशैभरिका उच्च अदालतहरुमा धर्ना दिएको छ । बारले मातहतका इकाईहरुलाई निर्देशन दिएअनुरुप देशैभरिका १८ वटा उच्च अदालतहरुमा बारले धर्ना दिएको हो ।
बुधबारको धर्ना तथा विरोधका लागि बारका पदाधिकारी र केन्द्रीय प्रतिनिधि उच्च अदालतहरूमा पुगेका थिए । बीरगन्ज उच्च अदालतमा विरोध प्रदर्शन गर्नका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल र अधिवक्ता भीमसेन बन्जरालगायत पुगेका हुन् ।
उच्च अदालत बार एसोसिएशन पर्साका अध्यक्ष प्रमोद प्रसाद साहको नेतृत्वमा बीरगन्जमा स्थित उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी ईजलासमा दुई घन्टा धर्ना दिइएको थियो । धर्ना लगत्तै अदालत परिसरमै आयोजना भएको विरोध सभामा सहभागिहरुले प्रधानान्यायाधीशको राजीनामा माग गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायालयमा विकृति, विसंगति, विचौलिया बढाएको आरोप लगाउँदै राजीनामा गर्न सहभागिहरुले माग गरेका हुन् ।
अध्यक्षको साहको अध्यक्षतामा आयोजना भएको विरोध सभामा अधिवक्ता देवेन्द्र सिंह, जिल्ला अदालत बार एसोसिएशन पर्साका अध्यक्ष ओमप्रकाश गुप्ता, बारा बारका अध्यक्ष सन्तोष गुप्ता, रौतहट बारका अध्यक्ष राजाराम यादव, बार एसोसिशनका पुर्व उपाध्यक्ष पन्नालाल गुप्ता, अधिवक्ता सुधिर कर्ण, विनय सिंहलगायतकाले आ–आफ्नो मन्तव्य राखेका थिए ।
वक्ताहरुले प्रधानन्यायधिशले राजीनामा नदिए कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी समेत दिएका छन् । जबराले प्रधानन्यायाधीशको संवैधानिक जिम्मेवारी बहन गर्न नसकेको र आगामी दिनमा पनि गर्न नसक्ने ठहर गर्दै राजीनामा माग गरिएको वक्ताहरुले बताएका थिए । स्वतन्त्र, स्वच्छ, भयरहित न्यायपालिका बनाउनमा बाधकको रूपमा रहेका प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा वा बहिर्गमन बिना नसकिने भएकाले आफूहरू बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनु परेको विरोध सभाका वक्ताहरुको भनाई रहेको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले ’संविधानको पवित्र उद्देश्य र संवैधानिक दर्शनलाई सम्पूर्ण रूपमा भताभुंग र नष्ट गर्ने गरी स्वयं पदासीन प्रधानन्यायाधीशबाट उक्त संवैधानिक जिम्मेवारीलाई आफ्नो निजी सम्पत्ति सरह स्वेच्छाचारी ढंगले दुरूपयोग गरेको’ ले आफूहरू आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको उनीहरुले बताए ।
बिहीबार बारा र शुक्रबार रौतहटमा पनि बारले प्रधानान्याधीश जबरा विरुद्ध प्रदर्शन गर्दैछ ।
Previous articleबीरगन्ज : भन्सार छलिका सामाग्री बरामद
Next articleबाँके कांग्रेसका ढुकढुकी वीरन्द्र शाहकाे भनाइ, संगठनमा अनुशासन उच्च प्राथमिकतामा..